प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण पहिलो दिन: नेपाली दुताबासमा भेटघाट-Brtnepal.com
Loading... प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण पहिलो दिन: नेपाली दुताबासमा भेटघाट
विआरटि नेपाल सम्बाददाता, अर्जुन खनाल, नयाँ दिल्ली ।
Published on September 15, 2016 at 8:27 am
राष्ट्रिय स्वाधिनताको कुरा राष्ट्रिय एकतासँग जोडीएको छ – प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड” यतीबेला छिमेकी राष्ट्र भारतको ४ दिने औपचारिक भ्रमणमा हुनुहुन्छ । आज भारत आएको पहिलो दिन नेपाली राजदूतावासमा भारतीय समाजवादी नेताहरू शरद यादव, सीताराम यचुरी र डिपि त्रीपाठी लगायतका नेताहरुसँग भेट भएको छ ।
भेटपछी दूतावासमै प्रवासी नेपाली जनतालाई सम्बोधन गर्दै सम्माननीय प्रमले राष्ट्रिय स्वाधीनताको कुरा राष्ट्रिय एकतासँग जोडिएको प्रसङ्गमा बोल्नु भयो । वहाँले यहाँ मैले बुझेका ज्ञापनपत्र र यहाँ प्रवासी समस्याका बारे उठेका कुराहरूलाई हेर्ने हाम्रो प्रयास रहनेछ ।
आन्दोलन सम्बन्धका कुराहरू पटक पटक सुनेको छु र आज पनि सुने, आन्दोलन गर्दा भरोसा गर्ने राजनैतिक परिवर्तन पछी विर्सने । खोलो तर्यो लौरो विर्स्यो जस्तै गरिएको छ भन्दै वहाँले थप बोल्दै भन्नुभयो, नेपालको गणतन्त्र प्राप्तिमा प्रवासी जनताको निकै ठुलो योगदान यो भ्रमणमा नेपाली राजदूतावास का. बा. राजदूत कृष्ण प्रसाद ढकाल सहितको टोली सक्रिय रूपमा अग्रसर भएको देखियो । प्रवासमा विभिन्न तह र तप्काका संस्थाका प्रतिनिधिहरूले प्रमलाइ सम्मान गरेका थिए ।
विभिन्न जनवर्गिय सङ्घ संस्थाहरूले बोलेका थिए र सबैले आ–आफ्नो संस्थागत ज्ञापन पत्र प्रमलाइ बुझाएका थिए । दाहाल पत्नी सिता दाहाल, परराष्ट्र मन्त्री प्रकाश शरण महत लगायत सभासदहरुको पनि बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो ।
प्रवासी नेपालीहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको सो सभा दूतावासको आयोजनामा राजदूत निवास भन्दा अगाडीपट्टीको चौरमा सम्पन्न भएको थियो । अहिले प्रम बिहारका मुख्यमन्त्री सँग दूतावासमै भेटघाटमा व्यस्त हुनुहुन्छ ।